"အခမ်းနားဆုံးး မုသားများ " - Barnyar Barnyar
“အခမ်းနားဆုံးး မုသားများ “
May 4, 2022 thanzin laypyay Life Style 0
“အခမ်းနားဆုံးး မုသားများ ”
သူဌေးအိမ်မှာ အိမ်ဖော်လုပ်နေတဲ့ ကောင်မလေးကို နယ်ကသူ့အမေက ဖုန်းဆက်ရင်း မေးတယ် သမီးလေး အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်ပြေရဲ့လားး?
“ဟုတ်ကဲ့အမေ သမီးအဆင်ပြေပါတယ် သူဌေးလင်မယားကလဲ သဘော အရမ်းကောင်းကြတယ်”တဲ့ သူဌေးကတော် ခေါက်လို့ ဖူးနေတဲ့ ခေါင်းလေးကို ပွတ်ရင်းဖြေတယ်…
“မောင်တိုးရေ မင်းအမေဖုန်းဆက်တယ် လာပြောလိုက်ဦး” စားပွဲထိုးလေးမောင်တိုး ဆေးလက်စ ပန်းကန်တွေ ပစ်ချပီး ပြေးသွားတယ် “သား လူလေး နေကောင်းလား အဆင်ပြေလား သားလေး”
“အင်းးးအမေ ပြေတယ် စားသောက်ဆိုင်ဆိုတော့ မုန့်တွေလဲ အများကြီးစားရတယ် အမေရဲ့” မနက်ကတည်းက ဘာမှ မစားရသေးလို့ တဂွီဂွီမြည်နေတဲ့ ဗိုက်ကအသံ အမေကြားသွား မလားလို့တော့ စိုးရိမ်မိသားး
“ဟျောင့်းးး ဖိုးဇော် တပ်ရင်းအဝမှာ မင်းအဖေ ဧည့်တွေ့လာတယ် သွားလိုက်ဦးး” ရဲဘော်လေးဖိုးဇော် အိပ်ယာအောက်ကိုလှန် သတင်းစာလေးနဲ့ ကျစ်ကျစ် ပါအောင် ထုတ်ပီး ဖွက်ထားတဲ့ လစာ တစ်သိန်းကို ယူပီး တပ်ရင်းဝက သူ့အဖေဆီပြေးတယ်…
“သားးဖိုးဇော် အဆင်ပြေရဲ့လားးကွ ဒီမှာ မင်းစားဖို့ မင်းအမေ ဟင်းဘူးတွေ ထည့်ပေးလိုက်တယ်” “ဟာ အေဖကလဲ မလိုပါဘူး အဖေတို့စားဖို့
ပြန်ယူသွား သားဒီမှာ အဆင်ပြေတယ် ဒီလလစာကျန် တစ်သိန်းတောင် အဖေတို့ကို သားကန်တော့နိုင်မယ်…
အဖေ့လက် လစာလေးအပ် အဲ့နားမြေကြီးထဲတင် ဒူးလေးထောက် ထိုင်ကန်တော့ “သားးးးမင်းသုံးဖို့ရော ရှိရဲ့လားကွာ ပြန်ယူထားပါလား” “ရပါတယ် အဖေရာ သားအတွက်က ဘာမှ ပူစရာမရှိပါဖူး အစစအရာရာအဆင်ပြေပါတယ်”
အဖေ့ရဲ့အပြုံးးတွေအောက် နေ့တိုင်းစားနေရတဲ့ ပဲရည်ကျဲဟင်းနဲ့ ကြက်ဥရေလုံပြုတ်က ပိုပီး အားရှိစေခဲ့တယ်…
လိမ်ညာခြင်းဟာမကောင်းကြောင်း လောကနီတိတွေ ကိုသင်ပီးပြန်လာတဲ့ ကျောင်းဆရာမလေးးမိုးချုပ်လို့ အိမ်နဲ့ phပြောတဲ့အခါ ဗွက်တောထဲ လမ်းလျှောက်သွားရတဲ့ ဒုက္ခတွေ မသိတော့ဖူး..
-အိမ်ပို့ဖို့ လစာမကျန်မှာစိုးလို့ အသီးရွက်ကြော်နဲ့ ဘဲဥပဲ အမြဲစားနေရတဲ့ ဒုက္ခတွေ မရှိတော့ဖူးး -နယ်မြေက မငြိမ်းချမ်းလို့ ကျီးလန့်စာစား နေနေရတဲ့ သောကတွေကို မေ့ပီးအဆင်ပြေပါတယ် အမေလို့ ညာမိပြန်တယ်
ဘဝမှာ လူတကာကို အကြိမ်ကြိမ် ညာဖူး လိမ်ဖူးကြပေမယ့် အဝေးရောက်သားသမီးတွေရဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လက်တလောဒုက္ခတွေ သောကတွေကိုမေ့ပီး မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက် “အဆင်ပြေပါတယ် အဖေ” “အဆင်ပြေပါတယ် အမေ” လို့ ညာရတဲ့ အချိန်တွေက အခမ်းးနားဆုံးးနဲ့ ကျေနပ်ရဆုံး
(အဝေးရောက် သားသမီးများသာ နားလည်မည်) ❤️
“အခမျးနားဆုံးး မုသားမြား “
သူဌေးအိမျမှာ အိမျဖျောလုပျနတေဲ့ ကောငျမလေးကို နယျကသူ့အမကေ ဖုနျးဆကျရငျး မေးတယျ သမီးလေး အလုပျလုပျရတာ အဆငျပွရေဲ့လားး?
“ဟုတျကဲ့အမေ သမီးအဆငျပွပေါတယျ သူဌေးလငျမယားကလဲ သဘော အရမျးကောငျးကွတယျ”တဲ့ သူဌေးကတျော ခေါကျလို့ ဖူးနတေဲ့ ခေါငျးလေးကို ပှတျရငျးဖွတေယျ…
“မောငျတိုးရေ မငျးအမဖေုနျးဆကျတယျ လာပွောလိုကျဦး” စားပှဲထိုးလေးမောငျတိုး ဆေးလကျစ ပနျးကနျတှေ ပဈခပြီး ပွေးသှားတယျ “သား လူလေး နကေောငျးလား အဆငျပွလေား သားလေး”
“အငျးးးအမေ ပွတေယျ စားသောကျဆိုငျဆိုတော့ မုနျ့တှလေဲ အမြားကွီးစားရတယျ အမရေဲ့” မနကျကတညျးက ဘာမှ မစားရသေးလို့ တဂှီဂှီမွညျနတေဲ့ ဗိုကျကအသံ အမကွေားသှား မလားလို့တော့ စိုးရိမျမိသားး
“ဟြောငျ့းးး ဖိုးဇျော တပျရငျးအဝမှာ မငျးအဖေ ဧညျ့တှလေ့ာတယျ သှားလိုကျဦးး” ရဲဘျောလေးဖိုးဇျော အိပျယာအောကျကိုလှနျ သတငျးစာလေးနဲ့ ကဈြကဈြ ပါအောငျ ထုတျပီး ဖှကျထားတဲ့ လစာ တဈသိနျးကို ယူပီး တပျရငျးဝက သူ့အဖဆေီပွေးတယျ…
“သားးဖိုးဇျော အဆငျပွရေဲ့လားးကှ ဒီမှာ မငျးစားဖို့ မငျးအမေ ဟငျးဘူးတှေ ထညျ့ပေးလိုကျတယျ” “ဟာ အဖေကလဲ မလိုပါဘူး အဖတေို့စားဖို့
ပွနျယူသှား သားဒီမှာ အဆငျပွတေယျ ဒီလလစာကနျြ တဈသိနျးတောငျ အဖတေို့ကို သားကနျတော့နိုငျမယျ…
အဖလေ့ကျ လစာလေးအပျ အဲ့နားမွကွေီးထဲတငျ ဒူးလေးထောကျ ထိုငျကနျတော့ “သားးးးမငျးသုံးဖို့ရော ရှိရဲ့လားကှာ ပွနျယူထားပါလား” “ရပါတယျ အဖရော သားအတှကျက ဘာမှ ပူစရာမရှိပါဖူး အစစအရာရာအဆငျပွပေါတယျ”
အဖရေဲ့အပွုံးးတှအေောကျ နတေို့ငျးစားနရေတဲ့ ပဲရညျကြဲဟငျးနဲ့ ကွကျဥရလေုံပွုတျက ပိုပီး အားရှိစခေဲ့တယျ…
လိမျညာခွငျးဟာမကောငျးကွောငျး လောကနီတိတှေ ကိုသငျပီးပွနျလာတဲ့ ကြောငျးဆရာမလေးးမိုးခြုပျလို့ အိမျနဲ့ phပွောတဲ့အခါ ဗှကျတောထဲ လမျးလြှောကျသှားရတဲ့ ဒုက်ခတှေ မသိတော့ဖူး..
-အိမျပို့ဖို့ လစာမကနျြမှာစိုးလို့ အသီးရှကျကွျောနဲ့ ဘဲဥပဲ အမွဲစားနရေတဲ့ ဒုက်ခတှေ မရှိတော့ဖူးး -နယျမွကေ မငွိမျးခမျြးလို့ ကြီးလနျ့စာစား နနေရေတဲ့ သောကတှကေို မပေီ့းအဆငျပွပေါတယျ အမလေို့ ညာမိပွနျတယျ
ဘဝမှာ လူတကာကို အကွိမျကွိမျ ညာဖူး လိမျဖူးကွပမေယျ့ အဝေးရောကျသားသမီးတှရေဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ လကျတလောဒုက်ခတှေ သောကတှကေိုမပေီ့း မိဘတှစေိတျခမျြးသာဖို့အတှကျ “အဆငျပွပေါတယျ အဖေ” “အဆငျပွပေါတယျ အမေ” လို့ ညာရတဲ့ အခြိနျတှကေ အခမျးးနားဆုံးးနဲ့ ကနြေပျရဆုံး
(အဝေးရောကျ သားသမီးမြားသာ နားလညျမညျ) ❤️
“သားသမီးကို ချစ်ရာမရောက်ဘဲ နစ်ရာရောက်တယ်”ဆိုတာမျိုး မဖြစ်ချင်ရင် ဖတ်ကြည့်ပါ…
ရတနာပုံခေတ်နှောင်းပိုင်းတွင် နန်းတွင်းကို လျှပ်စစ်မီးလင်းစေခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်မီးစက်